Nolol Xumo La Soo Daristay Qoysas Ku Barakacay Daadadkii Deg.Baardheere
Maamulka Deg.B/Xaawo Ee G/Gedo Oo Si Kulul Uga Hadlay Hadal Ka Soo Yeeray Wasiirka Amniga Gudaha Kenya
Weriye: Maxamed Gaarane Aadan
Hadalkaasi oo uu shaaca ka qaaday wasiirka amniga gudaha Kenya Pro.George Satoiti ayuu ku sheegay in ay gacanta ku hayaan ilaa 155 dagaalyahano soomaali iyo itoopiyaan ah,kuwaasoo uu sheegay in ay qabteen xili ay ku luglahaayeen xasarado iyo dagaal ka dhacayay degaanka mandheera.waxaana uu tilmaamay George Saitoti in dagaalyahanada Itoobiyaanka ee la qabtey in loo gacan galin doono xukuumada Itoobiya, laakiin wuxuu sheegay in kuwa Soomaalida ah lagu hayn doono dalka Kenya xabsiyada ku yaal.
Ammuurtaasi ayaa waxaa si care leh uga jawaabay Guddoomiyaha Deg.B/Xaawo Axmed Maxamed Yuusuf Burkuus oo ku sheegay in ay tahay mid xaqiiqo ah in askarta Kenya ay iska qabqabteen muwaadiniin soomaali ah kuwaasoo laga been abuurtay.waxaana uu xusay in dadkaasi la iska qabqabtay xili ay ka dukaamaysanayeen gudaha Kenya.Burkuus ayaa carabka ku dhuftay in Kenya ay had iyo jeer iska qabqabato shacabka soomaaliyeed ee aan lahayn dowlad u dooda.
Guddoomiyaha Deg.B/Xaawo ayaa fariin u diray wasiirka amniga gudaha Kenya u sheegay in uu si qoto dheer uga fiirsado hadalada aan loo meel dayin ee laga abuurayo shacabka soomaaliyeed/isagoo sheegay in ay aad ugu kalsoonyiihiin dadkooda uu sheegay in aysan haba yaraatee dagaalkaasi ka qaybqaadanin.
“Hadalkaasi waa been laga abuuranayo dadkeena waanu ognahay in keenya ay mar kasta ummada soomaaliyeed u saariso wax aan jirin taasina kama duwana dadka la gadanayo afar iyo labaatanka saac ee ay qabsanayaan askarta Kenya.anagu waan ku dadaal naa sidii aan u nabadayn lahayn xuduudaha maadaama aan nahay dad daris,waad ogtahay dadaaladii aan ka gaysanay gaadiidkii iyo dadkii lag soo qafaashay dhinaca Kenya” ayuu yiri burkuus.
Wasiirka amniga gudaha Kenya Pro George Satoiti oo warfiyeenada kula hadlayay magaalada Nairobi ayaa daboolka ka qaaday in ay hayaan dagaalyahano soomaali ah iyo hub dhan130 qoryaha darandooriga u dhaca, 6 miino, iyo tobanaan waxyaabaha qarxa oo u badan bambooyinka gacanta laga tuuro.
Ugu Dambayn George Satoiti ayaa sheegay in dowlada Kenya ay baaritaan ku sameynayso wararka sheegaya in ciidankeedu ay gobolka Waqooyi ee dalkeeda ka geysteen tacadiyo bini’aadam iyo dil dad rayid ah.taasoo walaac ay ka muujiyeen ururada xuquuqda aadamaha kaddib markii Boqolaal ka mid ah ciidamada Kenya ay ka qeybqaateen howlgalo muran dhaliyay oo la doonayay in lagu soo afjaro xiisado qabaa’il oo ka dhacay degaanka Mandheera kuwasoo sababay in ay dhintaan dad ka badan 30 meeyo.
Qoysaskaasi oo Tiradooda lagu sheegay ilaa 900 oo Qoys kana barakacay Daadad harqiyay Xaafado ku yaala Degmada Baardheere ayaa xaaladooda Binaadantinimo laga deyrinayaa, Dadkaasi Barakacayaasha ah oo ay ka mid yihiin Haween iyo Caruur ayaa daadsan dhul sare halkaas oo aysan ku haysanin agabka Aas aasiga ah Nolosha Bin aadanka .
Yuusuf Max’ed Qoor yarey waa madaxa gudiga dadka soo barakacay waxaana uu iiga war bixiyay dhibaatada Haysata Qoysaskaasi ka Barakacay Daadadkii dhowaantan ka dhacay gudaha Degmada baardheere waxuuna sheegay in xaalada Dadkaasi ay tahay Mid haatan lagu tilmaamikaro mid joogta Heer Bin aadantinimo, waxuuna baaq u jeediyay dhamaan cidii wax u qabankarta dadkan Tabaaleysan.
Inkastoo daadadkaasi soo ragmaday ay haatan dib ugu laabteen Goobihii ay ku soo rogmadeen ayaa waxaa weli muuqaneysa in guryo farabadan ay halkaasi ku bur bureen kuwaas oo dadkii lahaa ay dusha ka eeganayaan .
Qaar ka mid ah dadka barakacaya ayaa waxaa ka mid ah Dad horay uga soo cararay dulka tuulooyinka ee u teedsan nawaxiga Degmada Baardheere kadib abaaro iyo Biyo la’aan Saameeyay, waxaanay iminka Marlabaad Bilaabeen Barakac balaaran taas oo ka dhalatay kadib daadad ku soo rogmaday Xaafado ku yaala Degmada Baardheere .
Ilaa iyo iminka majirto cid gacan ka geysatay Waxu qabashada Dadkii ka barakacay Daadadkaasi waaaxay dadka Xaaladooda u muuqaneysaa mid aad uga sii dareysa Marba Marka ka dambeysa